Programmer's Diary: November 2007
၂၈ရက် နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးပွဲကို အွန်လိုင်းကနေ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပြီး ကွန်မန့်များရေးပေးသွားကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ၊ ဆီဗုံးကနေ အားပေးဆုတောင်းသွားကြတဲ့ အွန်လိုင်းက ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။ ဘယ်မှာ လုပ်သွားတာလဲ.. မသိတောင် မသိလိုက်ပါလား.. စားတောင် မစားလိုက်ရဘူးဆိုပြီး စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ။ ဘယ်မှာ ကျွေးရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတုန်းပါ။ ပြီးတော့ အခြေအနေ တစ်ခုပေးရင်တော့ မြန်မာပြည်ပြန်ဖြစ်ဦးမှာပါ။ မပြန်ဖြစ်ရင်တော့ စင်္ကာပူမှာပဲ ဧည့်ခံပွဲလေးလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းလေးများရှိရင်လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ Sponsor ပေးချင်သူများ အမြန်ဆက်သွယ်ပါ။ စင်္ကာပူထုံးစံအတိုင်း တန်းစီစနစ် ကျင့်သုံးပါမယ်။ :) First come first serve ပါ။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
အသိသက်သေများအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ အလုပ်ကနေ ခွင့်တစ်ရက်ယူပြီး လာပေးခဲ့တဲ့ မမေထား၊ ညက Night Shift အလုပ်လုပ်ထားလို့ ဖုန်းဆက်ပြီး မနည်းနှိုးယူတော့မှ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ရောက်ချလာတဲ့ ဗိုလ်တထောင်(၅)ကတည်းက ငယ်သူငယ်ချင်း စောမြင့်အောင်၊ ကားမောင်းပြီးလည်း လိုက်ပို့ပေး.. မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရော ဗီဒီယိုပါ တစ်ယောက်တည်း ဇယ်ဆက်သလို ရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုဇင်ကိုလတ်(ခ) စည်သူ (သံလွင်) တို့အားလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
ဘ၀ကို မိုက်ရဲ တိုက်ရဲ လိုက်ရဲသော ချစ်သူငယ်ချင်း ညီညီနှင့် စကားပန်းကလေးတို့အတွက် ...
မောင်ဂလာဆင်တော့ နောင်အခါတွင် ပြင်ရန်ခက်တာမို့
နင့်ကိုငါယုံလို့ ဘ၀ကို ပုံအပ်ခဲ့ပါတယ်
နင်ကလည်း နင် ငါကလည်း ငါ
ဒါပေမယ့် ငါတို့က ဘာလို့များ
အဲဒီ အချစ်ဆိုတာကြီးကို ဖက်အိပ်ပစ်ခဲ့မိပါလိမ့်ကွယ်
ဒီတော့ကာ နင်သာငါ့ကို မတွန့်တိုဘူးဆိုပါလျှင်
ဒီသံသရာတွင် .. နောင်သံသရာတွင် ..
ထူးထူးမထူးထူး ငါရူးရတဲ့ အချစ်ဆူးကလေးကိုပဲ
မင်းက ငါခေါ်ရာလိုက်မယ်လို့ ပြောခဲ့တာကိုး။
(ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်က ကိုညီထွဋ်ရဲ့ သူများကို အားကျမိတယ် အချစ်ကလေးရယ် သီချင်းကို အာဗြဲကြီးနဲ့ အော်ဆိုနေပါတယ်) :-)
သူများကိုချည်း အားမကျနဲ့။ မင်းအလှည့်ရော ဘယ်တော့လဲ။ ကဲ.. ကိုညီထွဋ်သီချင်းထဲကလို.. ဘယ်တော့လဲပြော...
ညီညီ နဲ့ ပိုးး)
နိုင်းနိုင်းရေ.. ကဗျာအတွက် ကျေးဇူး။
Nyi Nyi and Poe ...
May your wedding beanew beginning
toamarried life
full of Love , Luck and Happiness!!!
N2 .. ညီညီ အလှည့်တော့ပြီးပြီ.. N3 နေနေနိုင်အလှည့် ဘယ်တော့လဲဗျို့။
ချစ်သူတွေရဲ့ ရည်းမှန်းချက် အမြောက်အများထဲက အရေးအပါဆုံးနဲ့ ကြည်နူးစရာ အကောင်းဆုံးတစ်ခုကို ကိုညီနဲ့ မပိုးတို့ ပြည့်မြောက်ဖြတ်သန်းနိုင်တော့မယ်။ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ ခရီးလမ်းတလျှောက်မှာလည်း ပျော်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နေခဲ့သလို နောင်အတူလက်တွဲ ဖြတ်သန်းဦးမယ့် ရတုပေါင်းများစွာမှာလည်း ပျော်စရာအတိပြီးနေစေဖို့ ဒီအချိန်ကတည်းက ကျွန်တော် ကြိုပြီးဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ပြည့်မယ့်ဆု ဆိုတာလည်း သိပြီးသားပါ။
Congratulation Bro & Sis !
မောင်ပွတ်နဲ့ ခြူကလေးအတွက်လည်း ကြိုဆုတောင်းပေးထားလိုက်မယ်။ ရှေ့မှတ်တိုင်က စောင့်နေမယ်။
Congratulation Bro ညီ & Sis ပိုး !
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ..ညီမ ဒီမို
ကျွန်တော်ကတော့ ကဗျာတွေကာရံတွေ မပိုင်ဘူး အကိုရေ။ ဒါပေမယ့် ဆုတော့တောင်းပေးမယ်ဗျာ။
ဆန်းကြယ်မှုတွေပြည့်နေတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး အင်မတန်ခက်ခဲလှတဲ့ ဘ၀နှစ်ခု ပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုတဲ့ နက်နဲတဲ့ State ၁ခု ကို ကျွန်တော့် အကိုကြီး အောင်အောင်မြင်မြင် ဆိုက်ကပ်သွားတာ အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။
အနာဂတ်မှာ သာယာတဲ့ ဘ၀လေး၁ခု (၂ယောက်လည်း ၁ခုလို့ မှတ်လိုက်တော့ဗျာ) လှပစွာ ဆီးကြိုနေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
(p/s: စောစော Comments ပေးထားတာ၊ သူများတွေ သိပ်မများခင်)
ခုလို မမေ့မလျော့ လာဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ဝေဖြိုး။
Congratulations! ပါ ညီညီ နဲ့ စကားပန်းရေ
နှစ်ယောက်တစ်ဘ၀ အပြန်အလှန် နားလည်မှုတွေနဲ့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော ကိုယ်ပိုင် မိသားစုဘ၀လေး သက်ဆုံးတိုင် ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းလည်း တောင်း၏။
ကျန်းမာ ချမ်းသာ အားလပ်ချိန်များစွာနဲ့ အများ လေးစား အားကျရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် စုံတွဲလေး ဖြစ်ပါစေလို့ နော်။
မယ်လိုဒီမောင်: Wedding က ဘယ်မှာလုပ်တာလဲ ညီညီရ Congratulations! နော် :) (ဆီဗုံးထဲမှ ရယူသည်)
ဟုတ်ကဲ့.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါလို၏။ မမီ.. လက်မှတ်ပဲ ထိုးရသေးတာပါ။ ဧည့်ခံပွဲက နောက်မှ။ ဒီမှာတော့ ဒီလိုပဲ လုပ်ကြတာပဲလေ။
ပျော်ရွှင်ပါစေ..သံလွင် ကဗျာ ဆရာ ရေ..
Maung Maung Hla Win said...
Thanks bro. Guide me as you'reasenior member (not senior general) of the club :)
ဒီလင်နဲ့ ဒီမယား အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းသင်းရပါစေ .........
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ ဘလိုင်းတုတ်သတင်းထောက်ကြီးရေ။
ကိုညီညီ နဲ့ မစကားပန်း တို့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ရာသက်ပန် ပေါင်းသင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပီတိ
Khaing Thet Aung said...
Nyi Nyi and Poe,
"Love at first-sight is easy to understand; it's when two people have been looking at each other foralife time that it becomesaMiracle." (A Marriage Quote)
Since I missed your wedding treat, treat me next time when I come back. :)
Sincere Congrats to you both!!!
Sure. We owe youatreat when you come back. Thank you.
သံလွင်မြစ်ထဲက စကားပန်းလေးများ ထာဝရ လန်းဆန်းစွာ စီးဆင်းကြပါစေ..။
ခုလို လာရောက်ပြီး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုတက်စလာနတ်ရေ။
ချစ်သူနှစ်ဦး တို့ ပန်းခင်းသောလမ်းမှာ တသက်လုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အတူတကွ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။ အပြန်အလှန် နားလည်လေးစားမှုများနဲ့အတူ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ လက်တွဲနိုင်ကြပါစေ။
ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မပန်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။
ဆုဝေ: ကိုညီညီရေ...Congratulation နော်...ယနေ့မှစ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် တွဲလက်တွေ ခိုင်မြဲပါစေ...
အစ်ကို့ဘလော့ရော ပိုးဘလော့မှာပါ လာပြီး ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမရေ။
နိုင်လင်းထွန်း: ဝမ်းသာပါတယ် ကိုညီ...။ မင်္ဂလာနှစ်ပေါင်း ရာချီနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...။
ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ညီရေ။
မိုးလှိုင်ည: ဟားဟား သူမ၏ကဗျာဆရာတော့ပါသွားရှာပြီ ဂုဏ်ယူပါတယ် အစ်ကို ကျွန်တော် ကိုဖြိုးကိုပါ မြောက်ပေးလိုက်မယ်
မြှောက်ပေးလိုက်ပါ မိုးလှိုင်။ အစ်ကို့သူငယ်ချင်းမော်ဒန်ဘလော့ဂါကြီး ကောင်းရာသုဂတိရောက်အောင်.. (အဲ.. မှားကုန်ပြီ)
zyh: Congratulation သူငယ်ချင်း.. ။ ပျော်ရွှင်တဲ့ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါစေ...။
ကျေးဇူးပဲ သူငယ်ချင်း။ ရွှေထိုက်သီချင်းထဲကလို.. ကမ္ဘာငယ်လေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်မယ်.. ဒီမှာ သူရယ် ကိုယ်ရယ် ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြမယ်.. :)
NayNay: Congratulation ko nyi nyi..
Thank you NayNay
mitoe: congratulation par! ko nyi nyi and mama poe pyaw shwin par zay! "HAVE A NICE TIME!"
Thanks so much for your wish mitoe!
NYC: COOL PIX....HAVEA GOOD MARRIAGE TILL NEXT SO MANY YEARS......( OO AUNG MIN AUNG PAUNG YA BAR ZAY)S
NYC: WHERE IS THANLWIN EINMAT WEBSITE? NO MORE...............ANY HINT
Thanks for the wish NYC. I know most people are asking the whereabout of Thanlwin Ainmat. Well, there're some problems with our hosting company and the company where we bought the domain name. We're trying to figure out the best possible solution and i promise we'll make it happen soon. Thanlwin Ainmat will still go on. Again, thanks for your concern.
မွန်းသက်ပန်: congratulation ပါ ညီညီနဲ့ ညီမလေး ရေ...
ဖျားနာတဲ့အခါ မေးသမျှကို မညည်းမညူ ဖြေပြီး အကြံပေးတတ်တဲ့ ခင်စရာကောင်းတဲ့ ဆရာဝန်မကြီး မဇင်ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 1:05 AM6comments
ဒီဓာတ်ပုံက ရန်ကုန်ပြန်တဲ့အချိန်ကတည်းက စိုင်းဘုန်းထူး ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုမှာ သွားရိုက်လာတာပါ.. ပုံအသစ်တွေကိုတော့ ဓာတ်ပုံဆရာ ဇင်ကိုလတ် လက်စွမ်းပြပြီး ရိုက်ပေးမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်..
"With new dreams, new hopes, new aspirations andadesire to achieve new horizons, we are stepping intoanew beginning of wedded life.."
ညီညီ (သံလွင်) + စကားပန်း
စက်တင်ဘာ ၁၁ရက်၊ ၂၀၀၇
ဒီပုံကတော့ ဘလော့တိုင်းမ်အယ်ဒီတာကြီး မောင်ပွတ် လက်စွမ်းပြပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးထားတာပါ.. ကျေးဇူး မောင်ပွတ်!
ဇင်ကိုလတ်ရိုက်ပေးတဲ့ပုံတချို့ကို သူငယ်ချင်းကိုဖြိုးနဲ့ မောင်ပွတ်တို့ လက်စွမ်းပြထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတချို့လည်း ကျန်ပါသေးတယ်.. နောက်များမှပဲ ဘလော့မှာတင်ပါတော့မယ်..။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:39 AM 15 comments
ကဏ္ဍ - My Poems, Poems, Special Days in life
ကျွန်တော့်အမေ ကျောင်းတက်ဖူးခဲ့တဲ့ ကျောင်းရဲ့ နှစ်တစ်ရာပြည့်ပွဲအတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးပေးဖို့ အမေက အပ်ထားတာတော့ ကြာပါပြီ။ ဧပြီလ ရန်ကုန်ပြန်ကတည်းက ရေးခိုင်းထားတာ ဒီနေ့မှပဲ ရေးဖြစ်ပါတော့တယ်။ အဓိက ကတော့ ဘာရေးရမှန်း မသိတာကြောင့်ပါ။ ကိုယ်တိုင် တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းလည်း မဟုတ်တော့ ဘာမှ အမှတ်တရ မရှိတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးမယ်ပြောထားတဲ့ အကြွေးတစ်ခု ဆပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းတော့ စေတနာသက်သက်နဲ့ ရေးပေးနေတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ပရောဂျက်တစ်ခုနဲ့ အလုပ်များနေမှာဖြစ်လို့ ဘလော့ခ်ကို အရင်လို ပုံမှန်ရေးဖြစ်ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ နေ့စွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ အရင်က ရေးဖူးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို တင်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ “ဒီကျောင်းဝင်းထဲမှာ” ကဗျာကိုပဲ တင်ပေးထားပါတယ်။
ငါတို့လိုပဲ အဖြူအစိမ်းတွေ အမြဲဝတ်
၀ါသနာ၊ စေတနာ၊ အနစ်နာ
နာသုံးနာနဲ့ သင်ပြခဲ့တဲ့ အနန္တဂိုဏ်းဝင်ဆရာ၊ဆရာမတွေ
စုန်ရေသက်သက် စီးဆင်းရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မြစ်တွေ
မင်းတို့ငါတို့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဂုဏ်ယူနေရှာမယ်
မင်းတို့ငါတို့ကို စာသင်ပြခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေရှိတယ်
အရင်လို မခွဲမခြားဘဲ တသားတည်းပျော်ချင်တယ် သူငယ်ချင်း
နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်၊ ၂၀၀၇
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 5:28 PM4comments